Bacriminta dabiiciga ah | February 2020
Rose ayaa had iyo jeer loo tixgeliyaa boqoradda ubaxyada, sida muuqata, sidaas darteed waa iyada oo awood leh. Ubaxa wuxuu u baahan yahay fiiro iyo daryeel inta lagu jiro wareegga nolosha. Gaar ahaan kor u baahan tahay bacarimiso, iyada oo aan taas oo ay ku engegtay oo joojinayaan in ubaxu. Bacriminta macdanta ee hanoqo Maanta, dukaamada ubaxa waxaa jira xulasho ballaaran oo Bacriminta macdanta ah ee quudinta dhufanayasta: ee dareeraha dareeraha, granules, budada.
Noocyada kaabajka kaabajka ah ka badan si ay u quudiyaan kaabajka si ay u sameeyaan madaxa ah ee kaabajka
Kaabashka waa mid caadi ah, laakiin dalagyada beeraha oo aad u baahsan. Si loo xaqiijiyo samaynta saxda ah ee madaxyada waaweyn iyo kuwa cufan, waa muhiim inaad qaadato hab ka mas'uul ah bacarimis iyo bacarimiso dhirta. Xeerarka aasaasiga ah ee quudinta kaabajka cad Tani waxay jecel yihiin qoyaan iyo ciid wanaagsan oo dabacsan.
Ma suurtogal in la bacrimiyo beerta saxarada
Nitrogar waa qayb kiimiko ah oo muhiim u ah koritaanka dhirta. Nasiib darro, waxay si joogto ah uga baxdaa ciidda jawiga, sidaas awgeed waa muhiim in beeralaydu si joogto ah u magdhabaan khasaare nitrogen ee gadaal u goosashada wanaagsan. Bacriminta dabiiciga ah sida guaan, digada, compost waxay noqon kartaa ilgaar ah nitrogen, laakiin iibsigooda waxay u baahan yihiin kharashaadka.
Doorashada bacriminta guga beerta
Guga, marka dabeecadda soo baxdo, dadka deggan xitaa xagaaga ayaa sidoo kale noqda kuwo firfircoon, sababtoo ah iyaga waa waqti kulul. Si aad u hesho goosashada qani ku ah dayrta, waa inaad diyaarisaa ciidda gogosha gogosha guga hore, oo ay ka mid yihiin qaadashada Bacriminta saxda ah iyo daawashada qiyaasta saxda ah. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo baahida beeraha beerta ee lagu beeray goobta.
Compost waa bacriminta dabiiciga ah oo laga heli karo by dusha kala duwan ee dhirta (dhirta, cuntada, ciidda, caleemaha, saqaf, digada). Kombiyuutarada waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah, adigana adiga ayaa sameeya. Diyaargarowga compost ee bacaha qashinka waa hal hab oo keliya.
Sida loo sameeyo elixir for dhirta, cuntada kobcinta kiciya
Recently, bannaanka iyo bannaanka u badan iyo beerta ayaa ka fikiraya beeraha organic. Si kastaba ha noqotee, xaaladda hadda jirta ee ecology, wax dalag ah ma soo saari doonto goosashada wanaagsan iyada oo aan lagu kobcinaynin ciidda iyo bacriminta dhirta. Hase yeeshee, waxaa jira hab ka baxsan - kuwani waa kuwa iixitanka nafaqada iyo kiciyaasha kobaca ee gacmahaaga ka sameysan kara alaabta dabiiciga ah gacanta.
Bacriminta "cagaaran": waa maxay isticmaalka, sida loo kariyo iyo sida loo dalbado
Kobcinta beerta ama beerta khudradda ah maaha mid sahlan sababta oo ah waxay u muuqan kartaa in jaleecada hore. Si dhalidda sare, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo qaabka daryeelka ee dalagyada: dhirta, waraabinta, quudinta. Aynu ka hadalno bacriminta, isweydaarsiga dhirta cagaaran, ee maqaalkani. Waa maxay bacriminta cawska Bacriminta xayawaanku waa caleemo aan korin oo loo isticmaalo dhaqanka, waxaa loo oggol yahay inay koraan, ka dibna waxay isticmaalaan daryeelka adag ee beerta beerta iyo khudaarta cagaaran.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bacriminta dabiiciga ah 2020